विकास बोर्डमा अध्यक्षको कुर्सी खाली, को हो अबको अध्यक्ष ? « Ramailo छ
विकास बोर्डमा अध्यक्षको कुर्सी खाली, को हो अबको अध्यक्ष ?
चलचित्र विकास वोर्ड अध्यक्ष राजकुमार राईको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । गत जेठ २४ गतेबाट अध्यक्ष राईको कार्यकाल सकिएको हो । अहिले विकास वोर्डमा अध्यक्षको कुर्सी खाली छ । खाली कुर्सीमा बस्न भावी अध्यक्ष को आउलान् ?
शेर बहादुर देउवा सरकारको मन्त्री मण्डल विस्तार भैनसकेका कारण विकास बोर्डमा अध्यक्ष यही हुन्छ भन्ने पक्का नभएको फिल्मी नगरीमा चर्चा छ । काङग्रेसकै सञ्चार मन्त्री हुने भएपनि वोर्ड अध्यक्षमा भने यही हुन्छ भनेर पक्का छैन् । के पुर्व अध्यक्ष राई नै वोर्ड अध्यक्षमा भएर फर्किएलान् ? वोर्ड अध्यक्षको लागि सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट लविङ गरिरहेका छन् । सफल को हुन्छन्, प्रतिक्षा गरौं ।